Fe-potoana fihenam-bidy - Tianjin Panda Technology Group Co., Ltd
FEPETRA TSARA HO AN'NY MPANJAKA VAOVAO
Aorian'ny fanovana ny mpamatsy, raha tsy mahavita ny serivisy aorian'ny varotra ny mpamatsy tany am-boalohany, dia vonona ny hanao ny serivisy aorian'ny varotra izahay ao anatin'ny vanim-potoana fiantohana amin'ny fiheverana fa tsy navoaka ny fe-potoana fiantohana.
FEPETRA TSARA HO AN'NY MPANJAKANA BE
Vidiny manokana, famokarana laharam-pahamehana, fisafoana tsy tapaka, tatitra fanadihadiana momba ny tsena isan-taona.
SERVICE ANTSIKY KALITA
Ho fanampin'ny fanararaotana, ny fiovana, ny lozam-pifamoivoizana, ny fametrahana diso ary ny antony hafa ateraky ny fahasimban'ny kojakoja, ny fiantohana fiara mandritra ny telo taona, ny fiantohana hafa mandritra ny enim-bolana.
SERVIS PARTS MOUR ROSY
Ny mpivarotra dia hanome maimaim-poana ny mpividy3% ny kojakoja mitafy rehefa mitondra entana, toy ny kodiarana, dial aoriana, visy sy voanjo, tongotra, na araka ny takian'ny mpanjifa
1. Manolotra vahaolana tsara indrindra sy vokatra tsara indrindra izahay mba hiantohana ny fepetra takian'ny mpividy.
2. Afaka mandamina ny mpiasa ara-teknika matihanina indrindra izahay mba hanampiana ny mpividy.
3. Amin'ny fotoana rehetra, dia avy hatrany ara-teknika toro-hevitra mba hanampy mpividy.
SERVICE AORIAN'NY VAROTRA
1. Raha toa ka misy olana amin'ny kalitaon'ny entana azonao, na ny entana nalefa tsy nahy na tsy hita noho ny antony ny mpivarotra, raha lany ny entana noho ny tsy fahampian'ny piesy eny an-tsena, dia hanao mifampiraharaha amin'ny mpanjifa mba hamerenana na fanoloana piesy hafa.
2. Hanome kojakoja maimaim-poana izahay ho an'ny fahasimbana ateraky ny tsy olombelona ao anatin'ny 7 andro aorian'ny nahazoana ny entana.
3. Raha simba noho ny anton'ny olombelona ny ampahany, dia afaka manome ny ampahany karama izahay araka ny vidin'ny tsena.
4. Nandritra ny vanim-potoana fiantohana, raha tsy misy endrika ny frame na tsy mandeha tsara ny bisikileta na dia misy kojakoja fanolo aza, dia handefa bisikileta vaovao izahay.